December 2021 – 24hourspress
by cheavsothea December 31, 2021 December 31, 2021 0
~ ပရိတ်သတ်တွေအံဩနေကြရတဲ့ကွာရှင်းလက်မှတ်ထိုးဖို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ခြယ်သသွားတဲ့အမျိုးသမီး ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ပရိတ်သတ်တွေအံဩနေကြရတဲ့ကွာရှင်းလက်မှတ်ထိုးဖို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ခြယ်သသွားတဲ့အမျိုးသမီး ~ ~ ~
~ ဒီဇင်ဘာ(၂၃)ရက်မနက်ခင်းသတင်းများ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ဒီဇင်ဘာ(၂၃)ရက်မနက်ခင်းသတင်းများ ~ ~ ~
ပျော်ရွင်စရာနှစ်သစ်မဟုတ်လို့ Happy New Year လို့စာမပို့နဲ့လို့ဆိုလာတဲ့ ချောရတနာ #focuscele
~ ပျော်ရွင်စရာနှစ်သစ်မဟုတ်လို့ Happy New Year လို့စာမပို့နဲ့လို့ဆိုလာတဲ့ ချောရတနာ #focuscele ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ပျော်ရွင်စရာနှစ်သစ်မဟုတ်လို့ Happy New Year လို့စာမပို့နဲ့လို့ဆိုလာတဲ့ ချောရတနာ #focuscele ~ ~ ~
လှလိုက်တဲ့ နိုင်ငံရေးကစားကွက် ဒါကလူငယ်တွေအတွက်ပါ တချိန်မှာ အခွင့်လမ်းတခုဖြစ်လာမှာ Well Done!!! NUG
~ လှလိုက်တဲ့ နိုင်ငံရေးကစားကွက် ဒါကလူငယ်တွေအတွက်ပါ တချိန်မှာ အခွင့်လမ်းတခုဖြစ်လာမှာ Well Done!!! NUG ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO လှလိုက်တဲ့ နိုင်ငံရေးကစားကွက် ဒါကလူငယ်တွေအတွက်ပါ တချိန်မှာ အခွင့်လမ်းတခုဖြစ်လာမှာ Well Done!!! NUG ~ …
Yoon Yoon HDအစအဆုံး ၉ မိနစ်/ယွန်းယွန်း
~ Yoon Yoon HDအစအဆုံး ၉ မိနစ်/ယွန်းယွန်း ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO Yoon Yoon HDအစအဆုံး ၉ မိနစ်/ယွန်းယွန်း ~ ~ ~
Happy New Yearညရန်ကုန်ကြမ်းပြီ
~ Happy New Yearညရန်ကုန်ကြမ်းပြီ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO Happy New Yearညရန်ကုန်ကြမ်းပြီ ~ ~ ~
ဉာဏ်ရည်နိမ့်လွန်းတဲ့ စကစ အရေးပေါ်ပြီ
~ ဉာဏ်ရည်နိမ့်လွန်းတဲ့ စကစ အရေးပေါ်ပြီ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ဉာဏ်ရည်နိမ့်လွန်းတဲ့ စစ်မိစ္ဆာများ ~ ~ ~
~ အခုလေးတင်ဖြစ်သွားတာဗျာစိတ်မကောင်းလိုက်တယ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO အခုလေးတင်ဖြစ်သွားတာဗျာစိတ်မကောင်းလိုက်တယ ~ ~ ~
หวยเด็ด งวดนอด 17.1.2021
by User 01 December 31, 2021 December 31, 2021 0
เลขเด็ดหวยงวดนี้ 17/1/65 มาแล้วจ้า สำหรับข้อมูลหวยหมิงซี2ชุด ด้านบนและด้านล่าง เลขเด็ดงวดนี้ วันที่ 17 มกราคม 2564 รอดูกันได้เลย มีเลขอะไรน่าสนใจบ้าง? มาเที่ยวกันนะครับ. ~ ~ เลขเด็ดหวยงวดนี้ 17/1/65 มาแล้วจ้า สำหรับข้อมูลหวยหมิงซี2ชุด ด้านบนและด้านล่าง เลขเด็ดงวดนี้ …
~ သရုပ်ဆောင်ဖူးပွင့်သခင်တို့သားအမိပြောပြတဲ့အိမ်ဖော်လင်မယားကခိုးယူ”ဖောက်ထွင်း ကားနဲ့သယ်ယူသွားတဲ့ဖြစ်ရပ် ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO သရုပ်ဆောင်ဖူးပွင့်သခင်တို့သားအမိပြောပြတဲ့အိမ်ဖော်လင်မယားကခိုးယူ”ဖောက်ထွင်း ကားနဲ့သယ်ယူသွားတဲ့ဖြစ်ရပ် ~ ~ ~